Gini mere Outgha ahia ahia gi ji adighi | Martech Zone
Ihe kpatara Ọpụpụ Mgbasa Ozi Gị na-adaghị
Onwere nnwa nke ndi anyi na ahia na ahia ahia choro iwepu ahia ahia. Agụla m ebe ụfọdụ ndị na-ere ahịa mbata kwuru na ọ dịghịzi mkpa maka ịpụ ahịa. N'ikwu eziokwu, nke ahụ bụ iberibe. Ọ bụ ndụmọdụ jọgburu onwe ya maka azụmaahịa ọ bụla na-achọ ịgbasa n'ime ahịa ọhụrụ ma jikọọ na atụmanya ha maara ga-eme ndị ahịa dị ukwuu.
Ọ bụrụ na ị nwere akara ama ama (dị ka ọtụtụ ndị na-ede blọgụ na ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-elekọta mmadụ), ọ nwere ike ọ gaghị adị mkpa iburu ekwentị ma kpọọ oku oyi. Okwu onu na okwu nnabata nwere ike inyere gi aka ịzụlite ahia gi. Nke ahụ abụghị okomoko nke ọtụtụ ụlọ ọrụ nwere, agbanyeghị. Iji nwee ike tolite ma merie nkwụsịtụ, ọtụtụ ụlọ ọrụ ga-etinye usoro azụmaahịa ọpụpụ. Ọbụna mgbe ahụ, ọ dị ọtụtụ ndị a na-akpọ ọkachamara n'ịzụ ahịa na-enye ndụmọdụ maka ọnụọgụ ọtụtụ kọntaktị nwere atụmanya tupu ha agbahapụ ha.
Otutu uzo ahia ahia di iche iche adighi n'ihi na ha adighi-achota ikpo ndi ahia ndi no n'ime ulo oru ha. Anyị tụlere banyere nke a uche Bill Johnson - ngalaba-nchoputa nke Jesubi, a ngwá ọrụ na-atụgharị ahịa ahịa na onye nkwado nke Martech.
Ike nke Ọnwụ
Otu n'ime ihe mere Bill ji bụrụ nnukwu onye kwere ekwe na nnọgidesi ike ọkachamara na ihe kpatara ha ji wuru Jesubi na-alaghachi n'oge ha bụ nwata Aprimo. Emere mkpebi ahụ ịkpọ ndị na-ere ahịa ihe ruru ugboro iri na abụọ ihe karịrị izu iri ruo iri na abụọ na-anwa ime ha ka ha jiri ekwentị kparịta ụka. N'ihi na Aprimo na-elekwasị anya na ndị otu azụmaahịa Fortune 10 ha nwere ọtụtụ mmadụ ịlele.
O siiri ya ike nke ukwuu the wepu ekwentị ma ọ bụ weghachite ozi olu. Merrill Lynch dị na ndepụta ha ha nwere 21 aha ahia ka nwaa… si CMO, ka VP nke Marketing ka Director nke Internet Marketing, wdg Onye isi ahia nke Ahịa Ahịa emecha zaa ekwentị ya na nnwale 9th. Ọ bụ onye nke 18 enwetara. Ọ nabatara nkwa inwe nzukọ, ghọọ atụmanya siri ike, wee chụọ nkwekọrịta nkwekọrịta nke ọtụtụ nde dollar. A sị na ha kwụsịrị ịkpọ oku mgbe anyị gbalịsịrị 6 ma ọ bụ kpọọ naanị mmadụ 4, anyị agatụghị enwe mkparịta ụka.
Jesubi mechiri nkwekọrịta na nso nso a Xerox. Ntugharị Bill kpọrọ VP nke Ahịa 10 ugboro karịa oge izu 7. Ọ kwụgidere ya na nnwale nke abụọ :). Ọ gara n'ihu na-akpọ ma na ngbalị nke iri ọ na-ekwu n'eziokwu na abụghị m onye ziri ezi biko kpọọ SVP nke Ahịa. Onye nzaghachi m kpọrọ ya na ngbanye 2th ọ weliri ekwentị ya wee sị, "Abụ m nwoke siri ike iji jide otu i si mee ya?" Onye nnọchianya Bill kọwara usoro ya na etu Jesubi si nye aka. Xerox rịọrọ ka a gosipụta ya ebe ahụ na izu ole na ole mgbe nke ahụ gasịrị, Jesubi nwere ndị ọrụ 10.
Onweghi otu n'ime ihe atụ ndị dị n'elu ga-emechila site na ahịa inbound n'ihi na atụmanya ahụ achọghị azịza ya. Ọ dịghị onye ga-aza ozi olu. Ọ dịghị onye ga-azụrịrị ahịa na ụlọ ọrụ dị iche iche ma a na-akpọ ndị na-akpọ naanị 6 ugboro ma ọ bụ gafee kọntaktị 4. Ike bụ imata na ọ chọrọ ntachi obi na ịmara ihe nnọgidesi ike ahụ kwesịrị ịbụ.
Jesubi na-ebuli arụpụtaghị ahịa ahịa na akụkọ nwere nghọta na nsuso mkparịta ụka na-arụ ọrụ. Chekwaa oge ma ree ndị ọzọ site na iji otu pịa oku na ihuenyo, ịgbanye akpaaka na ngwaọrụ ndị na-akọ akụkọ dị ike.
Tags: akpọ oyiCRMjesubimeeka lynchahia n'èzíakpaaka ahịaire crmnyocha ahịaakpaaka ahịa ahịaxerox
TimeTrade: Ka ndi mmadu dikwa ndu oge gi!
Steeti nke Mgbasa ozi Mgbasa
Mar 12, 2013 na 9: 54 AM
Daalụ dị ka Doug oge niile, ihe mbụ ọ na-ada dị ka azịza akpaaka ahịa nke ọma kwesịrị ịchọpụta ọzọ, na nke abụọ post gị kpatara ezigbo mkparịta ụka gbasara mbido na obodo anyị.
Mar 12, 2013 na 10: 22 AM
Enwere isi mbelata ịlaghachi azụ. Na ndị ahịa B2B anyị na-arụ ọrụ anyị achọpụtala na mgbe anwalechara 8 nke ekwentị na ozi olu, nloghachi ma ọ bụ njikọ aka na-adapụ n'ike. Istnọgidesi ike n'ihe dị mma ma dị mma ruo mgbe ị ghọrọ ihe mgbu na-akpasu iwe na ịnyịnya ibu, nke na-ewute echiche nke ụlọ ọrụ na ụdị. N'ezie enwere ndị ọzọ ebe ndị ahịa "ndị nchịkwa" ga-arịgo n'okirikiri ma kwuo maka onye na-ere ahịa n'ime ndị gbalịrị mbọ 87 wee mepee ahịa nke ndụ ya. Nke ahụ bụ isịneke. Ọ bụrụ na mmadụ akpọọ m ugboro iri na abụọ mgbe m na-azaghị ya, ọ na-adị m njikere igba ngwa agha nuklia na azụmaahịa ha. Ọ dị mkpa ịmata mgbe ịhapụ ọrụ na itinye kọntaktị na ịzụlite usoro.
Mar 30, 2013 na 5: 22 PM
Akpa oyi, M hụrụ n'anya na-ekwu okwu na ekwentị. N'ihi gịnị? N'ihi na m na-eme ya obere, na nke ahụ bụ site imewe. Ọ bụrụ na m na-agwa mmadụ okwu, m na-azụkarị ma ọ bụ na-ere ihe. Enwere m ike ịnweta oku iri na abụọ kwa ọnwa nke m chọrọ ịnara - nke ọzọ 2 ruo 3 narị (m lere usoro VOIP anyị anya ugbu a) bụ BS nke m na-elelị. Ọ dị ka ahịa na-atụ anya na akpaaka na-atụ anya ịbawanye ọnụọgụ ahụ. Ka anyi kwuo okwu n'ezoghi - nke a agaghi adi nke oma maka isi nke uzo ozo. N'ihi gịnị? N'ihi na ekwetaghị m na onye ọ bụla ga-akpọ m azịza m na-elebeghị anya na ọ bụrụ na ọ bara uru, abịarula m ha nso. Uzo a mechiri emechi, obi ike gabu ihe mejuputara ufodu akparamagwa nke onye zụrụ m - a bụm onye mbutara mbụ na-azụta ihe bara uru ma na-ahọrọ ọwa dijitalụ - ọbụlagodi mmekọrịta mmadụ na ibe ya - iji nyocha ma wuo usoro esi edozi azụmahịa m. .
Yabụ, isi okwu ebe a bụ na agbanyeghị ugboro ole sistemụ ọ bụla kpọrọ m, ọ bụghị ọwa m masịrị m - ọ ga-arụ ọrụ n'ezoghị ọnụ, ndị mmadụ agbaala. Nke a apụtaghị na ọ rụghị ọrụ maka ndị ọzọ, ọ bụrụ na eziokwu ihe atụ ndị a dị n'elu na-egosi na ọ ga - agbanyeghị na echere m na ọ na - egosikwa na mmega ahụ onye na - azụ ahịa bụ ezigbo ọrụ mmega ahụ nke ndị ahịa niile nwere ike irite uru. Otu ọrịa strok anaghị arụ ọrụ maka mmadụ niile - ọ bụghị mkpebi aha ya, ogo ụlọ ọrụ ma ọ bụ ọbụna ịzụta ọrụ - ọ dabere na omume. Ma ihe ngwọta ya bụ ịzụ ahịa akpaaka, ma ọ bụ ahịa ịre ahịa na-enweghị ihe ọzọ ị ga-eji dochie anya ịmara onye ị na-agwa okwu. Ozugbo inwetara ha na ekwentị, mkparịta ụka ahụ ga-abawanye ọgaranya maka ya.
Justin Gray, Onye isi ala